China Soybean Peptide fekitori uye vanotengesa | Huayan
Soybean peptide chinhu chinoshanda chidiki mamorekuru peptide, inobviswa kubva kune soy kupatsanura protein ne enzymatic hydrolysis maitiro. Mapuroteni ari pamusoro pe90% uye ane 8 marudzi eamino acids ayo anobatsira munhu, chinhu chakanakisa mbishi zvinhu zvekudya uye zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano.
Chinyorwa Chinyorwa: Isiri-gmo soy protein
Soybean peptide idiki mamorekuru mapuroteni ayo anonwiwa zviri nyore nemuviri wemunhu uye akakodzera kune vese vanhu vane mashoma mapuroteni kugaya uye kunwa, senge vepakati-zera uye vanhu vakuru, post-operative kupora varwere, bundu, radiotherapy, chemotherapy varwere, gastrointestinal kukanganisika. Uye zvakare, soy peptide zvakare ine mhedzisiro yekuvandudza hutachiona, kuwedzera simba remuviri, kurwisa-kuneta uye uremu kurasikirwa. Uye zvakare, soy peptide ine yakanaka yekugadzirisa zvinhu senge pasina protein deatenation, kupisa isiri-coagulation, kusimba kwemvura, kugona kwakanaka, nezvimwewo chinhu chakanakisa chikafu chekudya.
1.Anti-kuchembera, Anti-kuneta uye simbisa mhasuru;
2.Lower cholesterol pamwero uye kuderedza ropa wokudhinda;
Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muchikafu, cosmetic uye mushonga.
2.Excellent tekinoroji maitiro
3.Provide yakazara-nguva mushure-kutengesa masevhisi.
Pashure: Gungwa Cucumber Peptide
Zvadaro: Walnut Peptide